Na-emegharị ọhụrụ, Onye Mmepụta nke Freshworks, bụngwa ọrụ nlebanye anya dị mfe na ntanetị nke na-amalite ọnụahịa dị egwu – n’efu. N’ihe dị obere, ọ ga-enyere gị aka ileba anya otu saiti ọ bụla dabere na isi ihe abhe nke ọsọ nzaghachi sava na oge.
Mēs jau 2010. gadā esam saslimuši ar ļaundariem, kas mūs gaida. Ngwaahịa ha mbụ, Freshdesk, ka ewuru iji tinye ma rụkwaa ọrụ ngụkọta ka ndị ọrụ weeụ webụta mgbalị ndị ahịa ha.
1 Gịnị bụ Atsvaidzinošs?
2 Gịnị Mere O Ji Dị Mkpa Ka Need Na-achọ Ezumike?
2.1 1. Dīkstāves na-emetụta ahịa
2.3 3. Ulo ahija
Gịnị bụ Atsvaidzinošs?
Ja jūs atrodaties pie tā, ka tas ir ticis pie tā, ka jūs esat iecerējis, ka viņa mechara ir svaiga. Na usoro iwu, ntọala nke Freshping dị mfe – iji nyere ndị ọrụ aka hụ na ebe nrụọrụ weebụ ha na-arụ ọrụ na ọkwa.
Nke a pụtara na ngwa ahụ na-enyocha weebụsaịtị ndị a gwara ya ma na-eleba anya n’ihe abụọ dị mkpa onye na-elekọta weebụ ga-achọ, oge nzaghachi sav ha na nnweta weebụsaịtị ha.
Ọ na – eme nke site na izipu ‘ping’ (ya aha ahụ, Freshping) na sava ahụ n’otu nkeji, wee dekọọ (a) ma ọ bụrụ na enwere nzaghachi na (b) ogologo oge o bija savud weebụ iji zaghachi. A na-echekwa ozi dati ahụ mgbe achọrọ ya, gosipụtara ya onye ọrụ ya na eserese ọrụ dị ọcha.
Gịnị Mere O Ji Dị Mkpa Ka Need Na-achọ Ezumike?
Tiešām ike ịnweta nlele nke nnụnụ na ntanetị anya nke saịtị gị.
Vietne na nkọwa ahụ, enyere m Freshping ọ ga-abụ na ị ga na-eche ihe simple ị ga – eji debanye aha maka ngwaọrụ ọzọ na – enye ụdị atụmatụ ahụ. Azịza ya dị mfe bụ na svaiga dịkwa karịa ka ọ dị (karịa na nke ahụ mechara).
Azịza nke ogologo bụ ma eleghé anya ihe ga – eme ka nku anya gịdị elu;
1. Dīkstāves na-emetụta ahịa
Atjaunot na-agba egwu n’okirikiri mgbe ị nyechara ya usoro iji arụ ọrụ. Ọ na – eme ka ị mara ma ọ bụrụ na enwere nsogbu, ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ na – anọdụ ebe ahụ naanị na – elele ma na – achịkọta data ka ị wee mee ihe mgbe ọ bụla ọ dị gị ka ọ.
Tīmekļa vietne, kurā mēs atrodamies, ir tikpat laba, kā jebkura cita vietne Amazon.com. Na 2018 n’oge Amazon Prime Day, ebe nrụọrụ weebụ ha malitere iche okwu metụtara agbanwe agbanwe. Oge ikpeazụ nke 63, okwu ndị ahụ na-efu nnukwu onye na-ere ahịa ọnụego $ 72,4.
Ọbụ ezie na ọnụ ọgụgụ ahụ agaghị abụ nke ị na-eche ihu, dīkstāves ka ga-efu azụmahịa gị maka sekọnd ọ bụla anaghị edozi ya. Iji mụta ego ole ị we re re we nwere ma ọ bọrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị ga-agbada, jiri usoro a wee met atụmatụ:
Ugbu, bija ya na ị bụ azụmaahịa tụkwasịrị obi na ebe nrụọrụ weebụ gị maka 100% nke ego gị!
Na gburugburu ebe na-azụ ahịa taa, ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa iji nyere ndị ahịa aka ịchọrọ, kamakwa ịkwesịrị ilekwasị anya na idobe ndị ochie. Nke a pụtara na afọ ojuju ndị ahịa dị mkpa karịa mgbe ọ bụla. Nrụọrụ webụsaịtị bụ otu mpaghara ebe okwu a dị.
Ọ bụrụ n’ị na-enye ọrụ, ndị ahịa na-enweghị ike ịbanye na ya ga-enwe obi ụtọ. Nke a pụtara na ịkwesịrị ịma nkeji nke enwere nsogbu na weebụsaịtị gị, dị ka oge dīkstāves ma ọ bụge oge oge nzaghachi ihe nkesa na-enweghị atụ.
3. Ulo ahija
Digitāls jaunums ir tas, ka mēs esam tikuši galā, mēs neesam tikuši, bet mēs esam tik labi, ka mēs esam tik labi! Ndị ahịa na-eche oge dowulant na weebụsaịtị gị agaghị egbu oge ịkpọ gị na mgbasa ozi mgbasa ozi ma ọ bụ igwe ndị ọzọ.
Ihe kachasị njọ gbasara mkpesa ndị a bụ na ha bụ ndị ọha na eze ma ma-eyi ogologo oge mgbe edozichara nsogbu ahụ, na-eduga na-emetụta ndị ahịa. Agbanyeghi na Freshping enweghị ike inye aka na nke ahụ, ọ nwere ike inye aka met me ị mata nkeji enwere nsogbu – ma nwee nchekwube ị nwere ike idozi ya tupu mkpesa amalite.
Kādreiz gaala na weebụsaịtị wee nwee ike ịnweta ya? Tụtụ oge, ị ga-emechi taabụ ihe nchọgharị ahụ wee gaa na nke ọzọ. Ekele maka ọnụ ọgụgụ weebụsaịtị dị ukwuu na ntanetị, enwere ọtụtụ ọnụọgụ ọzọ maka ihe niile.
Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị enweghị ike ijere ndị ahịa ozi; Dīkstāves na-enye ndị ahịa obi ọjọọ, ọkachasị ndị ọbịa.
N’ime obi ya, Freshping gbara gburugburu abụọ bụ isi yabụ ka anyị lekwasị anya na ndị ahụ. Iji jiri Freshping, ị ga-eme ya debanye aha maka akaụntụ. Enwere ike keme nke ahụ naanị dịka iji NJ Google gị sonyere. Mgbe nke a gasịrị, ọ bụ naanị maka ịgbakwunye URL na ntanetị ịchọrọ inyocha.
Dati dị oke mkpa nke Freshping chọrọ bụ adreesị weebụsaịtị gị na adreesị ozi ịntanetị gị. Ndị nke gara aga inyocha, na nke ikpeazụ ime ka ị mata ma enwere nsogbu ọ bụla. Ọ bụrụ na iwe ad ighị gị, nke ahụ bụ na, naanị ihe ị ga – achọ ka gị na ya na –ekwu maka ịdị mfe.
Maka ndị anyị kọwara nkọwa zuru ezu enwere ụfọdụ ntọala ị nwere ike ike ị tugharị. Ihe ndekọ efu na-enye gèhere inyocha ruo websaịtị 50 na oge ping nke ma obu nkeji ise. Nhọrọ ndị ọzọ dị elu dị ka nleba anya eriri nzaghachi, nloghachi koodu, ndị isi akụkọ HTTP omenala, wakwa ọkwa oge, yana ihe ndị ọzọ dị na atụmatụ ndị akwụ ụgwọ.
Maka onye ọrụ bụ isi, ọdịiche kachasị ga-abụ nke kachasị n’ogologo oge echedoro data ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ karịa ọnwa isii nke data iji zoo aka, ị ga-edebanye aha maka atụmatụ akwụ ụgwọ ha ọ bụla. M gbakwunye data bara uru karịa ma ọ bụrụ na ag na-agbakọ ya maka ọmụmụ ihe arụmọrụ ogologo oge.
Ja jūs neesat saņēmis īstu informāciju, jūs redzēsit:
Ngwakọta ngwa ndị ọzọ (kpọtụrụ gị na nalack, Twillo, ọ bụ ọbụna SMS)
Precīza SSL ngafe
Atjaunojot na-enye ndị ọrụ ohere ịdebanye aha maka ọ kpọrọ atụmatụ “Mgbe Ebighị Ebi” na ịkwụwa aka ọtọ, maka na ọtụtụ ndị mmadụ ga-adị mma. Joprojām ka ga-eso metrik nke ntụkwasị obi igodo, mana enwetaghị ụfọdụ atụmatụ na atụmatụ akwụ ụgwọ atụmatụ na-enye.
I nd ga a ga – eme ka ị mata ma enwere nsogbu ị nwere ike iwulite ma nwee olile anya na enyemaka nke ndị na – eweta Bochum, ma ọ bddị kachasị njọ, the Mbugharug na onye na-eweta mba ọzọ. Atụmatụ ịkwụ ụgwọ na-amalite dị ka $ 11 kwa ọnwa ma ọ bụrụ na akwụ ụgwọ ya kwa afọ – ewe uche zuru ezu maka obere azụmaahịa iji.
Reputācija ga-eji ọla edo mara ezigbo aha ya maka ọla edo tumadi n’ọgbọ ebe ndị ahịa na-ekwu okwu afọ ojuju maka ngwaahịa na ọrụ dị iche iche. Vietne na ntinye aka na-adịghị akwụ ụgwọ ọ nweghị ihe kpatara gị iji debanye aha ma nwalee ọrụ ha ugbu a.
Aga m akwado ka ị malite na atụmatụ ebighi ebi ha n’efu wee nyochaghachi ma obere ogere ge ga-achọ ịkwaga otu n’ime ụgwọ ha na-akwụ ụgwọ. E kwuwerị, ọ bụ n’efu na otu nhọrọ ọzọ ị nwere ike iji nyere aka met me ka ntụkwasị obi nke weebụsaịtị gị dịkwuo elu.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmata ihe, Freshworks nwekwara nnukwu ụlọ anụ na-akacha ewu ewu ngwaahịa metụtara, nke kachasị n’inyere gị aka ịgbanye aka na ịkwalite azụmaahịa (gụnyere ahị!). Lelee ibe ngwaahịa ha iji hụ ebe ọzọ ngwaahịa Freshworks nekad nebija līdzīgs inyere gị aka igbo mkpa azụmahịa ma nye ụlọ ọrụ gị mmụba na ike taa.
Četa, ọ bụrụ na ị na-edighi na mmepụta ihe ọhụrụ, ọ pụtara na onye gị na-asọ mpi na-abịa n’ihu.
We ike ike ụ ụ ụ ye ụ ọ ye ye ye ye-ọ ọ
Eleghị anya ị malitere blọgụ ga maka na ị nwere ụfọdụ ihe ọmụma n’ime